खाद्य सेवा जब र करियर | USAHello देखि काम स्रोतहरू | USAHello
खाना सेवा उद्योग र खाना सेवा जब विभिन्न प्रकारका बारेमा जान्न. तपाईं खाना र रेस्टुरेन्ट उद्योगहरूमा लाग्न सक्छ विभिन्न पेसा बाटाहरू पढ्न. पत्ता तपाईं के प्रशिक्षण आवश्यक र जहाँ आफ्नो काम खोजी सुरु गर्न. आफ्नै खाना सेवा कारोबार सुरु गर्ने newcomers बारेमा जान्न.
खाद्य सेवा कहिलेकाहीं खानपान उद्योग भनिन्छ, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय, वा आतिथ्य. धेरै 14 लाख मान्छे खाना सेवा उद्योग मा काम, र धेरै जब मा प्राप्त गर्न सजिलो छन्. अमेरिका बाहिर आफ्नो परिवार र साथीहरूसँग खान जाँदै मन पराउँछन् किनभने खाना सेवा उद्योग बढ्दै छ.
जो खाना सेवा काम?
यहाँ तपाईँले खाना सेवा उद्योग मा विचार गर्न सक्छौं केही जब र करियर हो:
खाद्य सेवा सहायक - खाना सेवा सहायक तयार र महंगा रेस्टुरेन्टमा cafeterias देखि स्थानहरू सबै प्रकार मा ग्राहकहरु खाना र पेय सेवा. तिनीहरूले पनि बिल मद्दत र भान्सा सफा र सुग्घर राख्न छ.
रेस्टुरेन्ट कुक - रेस्टुरा कुक तयार र क्याफेहरू वा सानो रेस्टुरेन्ट मा भोजन Cooks व्यक्तिलाई छ. तिनीहरूले पूरा भोजन खाना पकाउने गर्न सामाग्री खरीद देखि सबै के. ठूलो रेस्टुरेन्ट मा, तिनीहरूले फल र तयारी तरकारी र अन्य धेरै कार्यहरू संग वरिष्ठ Cooks मदत.
वेट्रेस वा वेटर - पर्खने टेबल मेनु वर्णन शामिल, आदेश लिएर, र सेवा खाना. जसले सार्वजनिक सामना मनपर्यो एक बहिर्गमन व्यक्तित्व कसैले लागि राम्रो काम हो. अमेरिका मा, सर्भर साथै सुझावहरू रकम. पत्ता लगाउनू कसरी रेस्टुरा सर्भर हुन.
कसाई - एक कसाई स्टोर र रेस्टुरेन्ट लागि पेशेवर मासु कटौती. कसाई तयार, मूल्य, र मासु प्रदर्शन. तिनीहरूले ध्यान र हात मा कार्यहरू नजिक ध्यान गर्न सक्षम हुनुपर्छ.
सेफ - महाराज एक प्रशिक्षित व्यावसायिक कुक लागि अर्को नाम हो. शेफ व्यञ्जनहरु निम्न र खाना पकाउने आपूर्ति ट्रयाक राख्नको लागि विस्तार गर्न उत्कृष्ट ध्यान हुनुपर्छ. केही शेफ सस या ग्रील्ड विशेषज्ञ. आँटा शेफ केक र मिठाईहरू विशेषज्ञ. एक Sous महाराज एउटा कार्यकारी शेफ अन्तर्गत काम गर्दछ र धेरै जिम्मेवारी साथ सहायता गर्ने कोही छ.
होस्ट वा पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री - एक होस्ट वा पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री आरक्षण ह्याण्डल र ग्राहकहरु greets. आफ्नो टेबल गर्न ले ग्राहकहरु, तिनीहरूलाई मेनु दिन्छ र साधारण तिनीहरूलाई सहज महसुस. होस्टिंग प्रविष्टि-स्तर काम छ, र हाकिमहरूले एउटा अनुकूल र विश्वसनीय व्यक्ति को लागि बरु ठूलो अनुभव भन्दा देख गरिनेछ.
रेस्टुरेन्ट प्रबन्धक - रेस्टुरा प्रबन्धक सम्पूर्ण रेस्टुरेन्ट व्यवस्थापन र निश्चित सबै सजिलै चल्छ बनाउँछ जो कसैले छ. तिनीहरूले कर्मचारी निरीक्षण, अर्डर आपूर्ति, कहिलेकाहीं ग्राहकहरु र ह्याण्डल मार्केटिङ र आर्थिक सामना. पत्ता लगाउनू कसरी रेस्टुरा व्यवस्थापन बन्नआर.
हेर्ने: एक आप्रवासी परिवारले आफ्नो रेस्टुरेन्ट र खानपान कारोबार सुरु कसरी
खाना सेवामा काम तपाईं पूरा र विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसहरूलाई अन्तरक्रिया गर्न अनुमति दिन्छ. काम शायद व्यस्त कहिलेकाहीं, र केही ग्राहकहरु ह्यान्डल गर्न गाह्रो हुन सक्छ. यो पेसा मा मान्छे को लागि राम्रो गुण दबाव र सकारात्मक मनोवृत्ति अन्तर्गत सुन्दर रहिरहेका छन्. तपाईं स्कूल वरिपरि आफ्नो काम अनुसूची गर्न सक्छन् धेरै खाना सेवा जब लचिलो घण्टा प्रस्ताव, परिवार, र अन्य गतिविधिहरु. तिमी सक्छौ careeronestop.org मा आत्म-मूल्यांकन परीक्षण लिन हेर्न काम तपाईं मिल्दो यदि.
अधिकांश मानिसहरू खाना सेवामा अनुभव हासिल, विशेष गरी रेस्टुरेन्ट मा, तल सुरु र बिस्तारै आफ्नो बाटो माथि काम गरेर. खाना सेवा बारेमा राम्रो कुरा तपाईं प्रशिक्षण वा अनुभव बिना धेरै जब मा प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने छ. यदि तपाईं तुरुन्तै जागिर आवश्यक त, त्यहाँ सामान्यतया उद्योग मा अकुशल कर्मचारीहरूको लागि मांग छ किनभने यो राम्रो विकल्प हो. तर तपाईं पकाउने प्रेम भने, वा व्यवस्थापन स्थिति मा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईं पहिलो केही प्रमाणपत्र वा अनुभव प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेछ.
प्रवेश स्तर जब लागि, यस्तो खाना सेवा सहायकको रूपमा, dishwashing, र प्रतीक्षा टेबल, कुनै विशेष प्रशिक्षण आवश्यक छ, सबैभन्दा हाकिमहरूले आफ्नो नयाँ कर्मचारीलाई मा-द-काम प्रशिक्षण दिनुहुनेछ. प्राप्त एक उच्च विद्यालय उपाधि तपाईं काम प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ. तपाईं पनि अन्य प्रशिक्षण र प्रमाणहरू गर्न मद्दत गर्नेछ प्राप्त गर्न सक्छन्.
खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण र प्रमाणपत्र
खाना सेवामा काम रही लागि राम्रो पहिलो चरण सुरक्षित खाना ह्यान्डलिङ लागि प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न छ. यो तपाईं खाद्य सुरक्षा नियमहरु बुझ्न र खाना सुरक्षित राख्न प्रशिक्षण गरिएको छ भन्ने देखाउँछ. केही राज्य अमेरिका मा (क्यालिफोर्निया, इलिनोइस, एरिजोना, पश्चिम भर्जिनिया, टेक्सास, र नयाँ मेक्सिको) यो खाना हेण्डलरहरू यो प्रशिक्षण गर्न को लागि व्यवस्था छ.
तपाईं आवश्यक प्रमाणपत्र खाद्य सुरक्षा को लागि एक एएनएसआई Accreditation छ. तपाईं एक एएनएसआई-मान्यता प्राप्त कार्यक्रम फेला पार्न आवश्यक हुनेछ. यी मान्यता प्राप्त कार्यक्रम को छ ServSafe, जो राष्ट्रीय भोजनालय संघ द्वारा चलाउन छ. तर अन्य धेरै आधिकारिक कार्यक्रम छन्. फेला आफ्नो राज्य वा अनलाइन खाद्य सुरक्षा प्रमाणपत्र मा खाद्य सुरक्षा कक्षाहरू.
खाना पकाउन र व्यवस्थापन प्रशिक्षण
जबकि केही रेस्टुरेन्ट सारा महाराज र शेफ पकाउने कला प्रशिक्षण प्राप्त गरेका छौं, अरूलाई आफ्नो अनुभव रेस्टुरेन्ट मा काम प्राप्त. प्रवेश-स्तर स्थान धेरै सुरु गर्न र सीढी अप सार्न कठिन काम.
तपाईं रेस्टुरेन्ट व्यवस्थापनमा रुचि छ भने, तपाईंले केही प्रमाणहरू आवश्यक हुनेछ. त्यहाँ धेरै दुई वर्ष व्यवस्थापन र प्रशासन उपलब्ध पाठ्यक्रम हो. तपाईं नजिकै एक समुदाय कलेज फेला.
त्यहाँ रेस्टुरेन्ट व्यवसायको बारेमा अनलाइन सिक्न धेरै अवसर छन्. अनलाइन विद्यालय तपाईं आफ्नो संचार सीप निर्माण र रेस्टुरा प्रबन्ध सिक्न मदत गर्नेछ. जस्तै, Coursera प्रस्ताव खाना र पेय व्यवस्थापनमा अनलाइन पाठ्यक्रम.
धेरै सामुदायिक कलेजहरु कम लागत पकाउने कला प्रशिक्षण कार्यक्रम संचार र अंग्रेजी कौशल सुधार शरणार्थी र आप्रवासी प्रस्ताव र मदत. तपाईं नजिकै एक समुदाय कलेज फेला.
पाक विद्यालय सारा महाराज र अन्य खाद्य सेवा करियर लागि प्रशिक्षण प्रदान. तपाईँले खोजी गर्न सक्नुहुन्छ एउटा पकाउने कला प्रशिक्षण विद्यालयहरूको अनलाइन निर्देशिका.
काम कोर युवा पुरुष र महिला उमेर निःशुल्क शिक्षा र तालिम प्रदान गर्दछ 16 गर्न 24. तिनीहरूले एक छ पाक कला कार्यक्रम.
आफ्नो स्थानीय रोजगार केन्द्र प्रयोग - हरेक शहरमा सरकार रोजगार केन्द्र मुक्त छन्. तिनीहरूले सल्लाह प्रस्ताव र स्थानीय जब सूची राख्न. तिनीहरूले रिजुमेहरू र काम आवेदन मद्दत. तिनीहरूले खाना सेवा काम प्रशिक्षण र शिक्षा तपाईंलाई जडान गर्न सक्नुहुन्छ. फेला आफ्नो निकटतम रोजगार केन्द्र.
अनलाइन हेर्न - snagajob.com एक रोजगार साइट मद्दत मान्छे खाना सेवा र अन्य उद्योगहरूमा प्रतिघण्टा जब पाउन छ.
खाना सेवा भविष्य - तपाईंको आफ्नो मालिक हुन!
तपाईं चाहनुहुन्छ खाना सेवामा काम र आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न? आफ्नो घर देशबाट शायद एक परम्परागत खाना - तपाईं एक खाना विशेषता छन्?
खाद्य ट्रक खाना पकाउन र खाना सेवा मोबाइल भान्सा छन्. खाद्य ट्रक ताजा खाना पकाएको सेवा, अक्सर एक जातीय विषय संग - आफ्नो घर देश देखि खाना नयाँ र रोचक अमेरिका हुन सक्छ. प्रत्येक बर्ष, देश भर खाना ट्रक संख्या बढ्छ. तिनीहरूले रेस्टुरेन्टमा वैकल्पिक रूपमा धेरै लोकप्रिय छन्. तपाईं राम्रो कुक वा थाहा कोही भने जो स्वादिष्ट भोजन Cooks, यो विचार सहयोग गर्न महान हुनेछ. एक खाद्य ट्रक पनि राम्रो परिवार व्यापार बनाउन हुनेछ. यस बारे पढ्नुहोस् स्पाइस भान्सा Incubator: खाना ट्रक उद्यमीहरू हुन शरणार्थी प्रशिक्षण गर्न. सिक्न कसरी एक खाद्य ट्रक व्यवसाय सुरु.
तपाईंको आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न कसरी